PHOTOSHOP မှာပုံစံလုပ်လုပ်နည်း - PHOTOSHOP ကို - 2019
Photoshop မှာပုံစံများ: သီအိုရီ, ဖန်ဆင်းခြင်း, အသုံးပြုခြင်း
Microsoft က Excel ကို software ကိုလူကြိုက်အများဆုံး spreadsheet အသုံးပြုသူများကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြီးမားတဲ့ tool ကိုရှိပါတယ်ကတည်းကဤလျှောက်လွှာကို, ကောင်းစွာထိုက်တန်တဲ့ရာအရပ်ကိုကြာပေမယ့်အလုပ်ကအတော်လေးရိုးရှင်းပြီးအလိုလိုသိသည်။ သင်္ချာ, စာရင်းဇယား, ဘောဂဗေဒ, စာရင်းကိုင်, အင်ဂျင်နီယာ, နှင့်အခြားသော: Excel ကိုသိပ္ပံနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လှုပ်ရှားမှုများအများအပြားဒေသများရှိပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်အစီအစဉ်ကိုအောင်မြင်စွာအိမ်ထောင်စုလိုအပ်ချက်အတွက်သုံးနိုင်တယ်။
ဒါပေမယ့် Excel ကိုသုံးပြီး, များစွာသောအသုံးပြုသူများအတွက်တစ်ဦးအားနည်းချက်ဖြစ်သည့်တဦးတည်းအတွက်အသိပေးချက်ရှိ၏။ ဒီ program ကနှုတ်ကပတ်တော်ကိုစကားလုံး Processor, PowerPoint တင်ပြချက်များနှင့်အခြားသောဖန်တီးရန် Outlook နဲ့ e-mail, program နဲ့လုပ်ကိုင်ဖို့ device ကိုလည်းပါဝင်သည်ဘယ်မှာ မှလွဲ. applications များ၏ Microsoft Office suite ကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကို။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် paid Microsoft က Office ကိုအထုပ်, နှင့်အထဲတွင်ထည့်သွင်းအစီအစဉ်များ၏နံပါတ်ပေးထား၎င်း၏တန်ဖိုးကိုအတော်လေးကြီးမားသည်။ ထို့ကြောင့်, များစွာသောအသုံးပြုသူများကိုအခမဲ့ Analogues Excel ကို install လုပ်ပါ။ အများဆုံးအဆင့်မြင့်နှင့်လူကြိုက်များသူတွေကိုကိုကြည့်ကြရအောင်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Microsoft Word ကို၏ Analogues
အခမဲ့ tabular ပရိုဆက်ဆာ
Microsoft က Excel ကိုနှင့်စာရင်းဇယားကိုခေါ် Analog စပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရှင်း tabular အယ်ဒီတာများအနေဖြင့်, သူတို့ကပိုအစွမ်းထက် functionality နဲ့အဆင့်မြင့် feature များဖြစ်ကြသည်။ ကျနော်တို့လူကြိုက်အများဆုံးနှင့် functional Excel ကိုပြိုင်ဘက်ပြန်လည်သုံးသပ်ရလိမ့်မည်။
အကျော်ကြားဆုံးအခမဲ့ရုံး suite ကို Apache ကို OpenOffice တွင်ထည့်သွင်းကြောင်း Excel ကို OpenOffice Calc လျှောက်လွှာများ၏ Analog စဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထုပ် (Windows အပါအဝင်) cross-platform ကိုရုရှားဘာသာစကားထောက်ခံပါတယ်နှင့် Microsoft Office ကိုရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်ကြောင်း applications များနီးပါးအားလုံး Analogues ပါဝင်သော်လည်းတစ်ချိန်တည်းမှာသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်လျော့နည်း disk space ကိုတက်ယူပြီးပိုမြန်ပြေးနေသည်။ ဒီ packet ကိုဝိသေသလက္ခဏာများဖြစ်သော်လည်း, ဒါပေမယ့်သူတို့က Calc application ကိုပိုင်ဆိုင်မှု၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နိုင်ပါသည်။
ကျနော်တို့ Calc အကြောင်းကိုအထူးသစကားပြောရန်လျှင်, ဒီ app ကိုအားလုံးနီးပါးကြောင်းနှင့် Excel ကိုလုပ်ဖို့တတ်နိုင်သည်:
Calc ပိုပြီး Excel ကို 2003 နဲ့တူအကြာတွင်ထက်မိမိတို့၏အဖွဲ့အစည်းအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့အလိုလိုသိ interface ကိုရှိပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Calc Microsoft ကဖို့ပေးဆောင်အမျိုးအနွယ်အဖြစ်နီးပါးအဖြစ်ကောင်းသောကြောင်းအစွမ်းထက်လုပ်ဆောင်ချက်ကိုရှိပါတယ်, တချို့သတ်မှတ်ချက်အပေါ်တောင်မှသူကမှီနိုငျ။ ဥပမာ, အလိုအလြောကျ user data ကိုအပေါ်အခြေခံပြီးဖြစ်ကြောင်းကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်များ၏ sequence ကိုအဖြစ်မပေးဖြစ်သော Excel ကိုတစ်ဦး built-in စာလုံးပေါင်းစစ် tool ကိုဆုံးဖြတ်သည်တဲ့စနစ်ရှိပါတယ်။ ထို့အပွငျ Calc တိုက်ရိုက် PDF ကို format နဲ့စာရွက်စာတမ်းတင်ပို့နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှုနှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောထောက်ခံပါတယ်မသာ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုသင်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အထူးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့်အတူစစ်ဆင်ရေးများအတွက်အသုံးပြုရနိုင် မာစတာဘယ်သူတို့နှငျ့အတူအလုပ်မလုပ်ဖို့ပိုပြီးလွယ်ကူသည်။ သို့သော်အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏, ထိုအမည်များ wizard ကို အင်္ဂလိပ်လို။
Calc ရှိတဲ့ default format နဲ့တစ်ဦး ODS ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လည်း XML ကို, CSV ဖိုင်နဲ့ XLS ekselevsky အပါအဝင်များစွာသောအခြားပုံစံများနှင့်အတူထိရောက်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် Excel ကိုကယျတငျနိုငျသော extension တွေနဲ့အတူအားလုံးဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။
Calc အဓိကအားနည်းချက်ကတော့သူဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်အခြေခံခေတ်သစ် Excel ကို XLSX format နဲ့အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပေမယ့်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအတွက် data တွေကိုသိုလှောင်သိမ်းဆည်းနိုင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ဖိုင်တည်းဖြတ်ပြီးနောက်သင်သည်အခြား format နဲ့ save လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သို့သော် Oupen Kalk ရုံး Excel ကိုရန်ထိုက်တန်ပြိုင်ဘက်အခမဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားစေနိုင်ပါသည်။
LibreOffice Calc ဆော့ဖျဝဲသော LibreOffice ရုံး suite ကိုအတူအခမဲ့ရရှိနိုင်ပါသည်, တကယ်တော့ဟောင်းကိုယ်ပိုင် OpenOffice developer များ၏တီထွင်တာဖြစ်ပါတယ်။ သို့အတွက်ကြောင့် data ကိုထုပ်အများအပြားအရိုအသေအလားတူဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, စားပွဲပေါ်မှာပရိုဆက်ဆာများ၏အမည်များတူညီဖြစ်ကြောင်းအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင် LibreOffice လူကြိုက်များသည်သူ၏အစ်ကိုယုတ်ညံ့သည်မဟုတ်။ သူလည်း disc ကိုအပေါ်အတော်လေးနည်းနည်းအာကာသကိုတက်ကြာပါသည်။
လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအတွက်လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲရုံး Calc OpenOffice Calc ရန်အလွန်ဆင်တူသည်။ ဂရပ်များနှင့်သင်္ချာတွက်ချက်မှုများဆောက်လုပ်ရေးပြီးပါက, tables တွေရဲ့ဖန်တီးမှုကနေ: ဒါဟာနီးပါးတူညီအမှုကိုပြုနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏ interface ကိုလည်းအခြေခံ format နဲ့ OpenOffice, LibreOffice ၏ကဲ့သို့ပင် Microsoft Office 2003 အပေါ်တည်ဆောက်ကာ ODS ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အစီအစဉ်ကိုလည်း Excel ကိုကထောက်ခံအားလုံးကို formats နှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ သို့သော် OpenOffice မတူဘဲ Calc မသာနိုင် XLSX format နဲ့ပွင့်လင်းစာရွက်စာတမ်းများ, ဒါပေမယ့်လည်းသူတို့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်။ သို့သော် XLSX အတွက်အလုပ်လုပ်တဲ့ထိန်းသိမ်းရေး Kalk လုပ်ထားတဲ့အားလုံးမဟုတ်ပုံစံဒြပ်စင်ဖိုင်ကို၌ရေးထားလျက်ရှိ၏စေခြင်းငှါ, ဥပမာ, ရောင်ပြန်ဟပ်သော, ကန့်သတ်သည်။
Calc နှစ်ဦးစလုံးတိုက်ရိုက်နှင့်တဆင့်လုပ်ဆောင်မှုနှင့်အတူအလုပ်လုပ်နိုင် function ကို Wizard ကို။ လုပ်ငန်းဆောင်တာ Russified ထုတ်ကုန်အမည်များအတွက် OpenOffice, LibreOffice ၏ဗားရှင်းမတူဘဲ။ အဆိုပါအစီအစဉ်တွင်ဘာသာစကားမျိုးစုံဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောဖန်တီးထောက်ခံပါတယ်။
သငျသညျ Excel ကိုအတွက်လက်ဆောင်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောအသေးစားအင်္ဂါရပ်များမရှိခြင်းကိုခေါ်နိုင်မ မှလွဲ. လွတ်ပြိုင်ကားပြိုင်ပွဲရုံး Calc ၏အားနည်းချက်များကိုများထဲတွင်။ သို့သော်ယေဘုယျအားဖြင့် ပို. ပင်အလုပ်လုပ်တဲ့ OpenOffice Calc ထက်လျှောက်လွှာ။
ခေတ်သစ်စကားလုံး Processor ကို PlanMaker ရုံး suite ကို SoftMaker ရုံးတှငျပါဝငျသောအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်း၏အင်တာဖေ့စလည်း Excel ကို 2003 interface ကို၏ဆင်တူသည်။
PlanMaker စားပွဲနှင့်ပုံစံချပေးနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လုံလောက်သောအခွင့်အလမ်းရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖော်မြူလာနှင့်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့လည်ပတ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။ tool တစ်ခု "Insert ရာထူးအမည်" ဒါဟာ့ Analog ဖြစ်ပါတယ် function ကို wizard ကို Excel ကို, ဒါပေမယ့်ကျယ်ပြန့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အဲဒီအစားသူက BASIC ပုံစံအတွက်မက္ကရို script များအသုံးပြုသည်။ စာရွက်စာတမ်းများ PlanMaker ကယ်ဖို့ software ကိုအသုံးပြုအခြေခံပုံစံ, extension ကို PMDX နှင့်အတူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် format နဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, လျှောက်လွှာအပြည့်အဝ Excel ကို format နဲ့ (XLS နှင့် XLSX) ကိုအထောက်အပံ့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဤလျှောက်လွှာ၏အဓိကအားနည်းချက်ကတော့အခမဲ့ဗားရှင်းအပြည့်အဝလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရက်ပေါင်း 30 ကြာမှသာရရှိနိုင်သောအချက်ဖြစ်ပါသည်။ Next ကိုအချို့ကန့်သတ်မှုကိုစတင်ရန်, ဥပမာ, PlanMaker XLSX format နဲ့အတူအလုပ်ကိုထောကျပံ့ဖို့တာတွေရပ်စဲ။
Excel ကိုရန်ထိုက်တန်ပြိုင်ဘက်တစ်ဦးဆငျဖိုနီစာရင်းဇယား, ရုံးက IBM Lotus ဆငျဖိုနီအထုပ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်ယူဆနိုင်သည့်နောက်ထပ် spreadsheet ။ ၎င်း၏ interface ကိုယခင်သုံးအစီအစဉ်ကို interface ကိုဆင်တူဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့ထံမှပိုပြီးမူရင်းကွဲပြားနေသည်။ စားပွဲနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကိုင်သည့်အခါရှုပ်ထွေးကွဲပြား၏ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်နိုင်ဆငျဖိုနီ Spreadsheet ။ ဒီပရိုဂရမ်အဆင့်မြင့်အပါအဝင်တစ်ဦးမျှမျှတတပေါကြွယ်ဝကိရိယာများ, ရှိပါတယ် function ကို Wizard ကို နှင့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Micro စနစ်နဲ့အခြားသောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်အခွင့်အလမ်း။ သဒ္ဒါအမှားတစ်ခု function ကိုရွေးချယ်ရေး Excel ကိုအတွက်မရရှိနိုင်သောရှိပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်, ဆငျဖိုနီ Spreadsheet အဆိုပါ ODS format နဲ့စာရွက်စာတမ်းများသိုလှောင်ပေမယ့်လည်းကို formats XLS အတွက်စာရွက်စာတမ်းများ၏ချွေတာရေး, SXC နှင့်အခြားသူများထောက်ခံပါတယ်။ Excel ကို XLSX တစ်ဦးသည်ခေတ်သစ် extenstion နဲ့ဖိုင်တွေဖွင့်လှစ်ပေမယ့်ကံမကောင်းမဟုတ်ဘဲတတ်နိုင်သမျှစာရင်းဇယားကိုကယ်တင်နိုင်ပါ။
အဆိုပါချို့ယွင်းချက်များထဲတွင်လည်းဆငျဖိုနီ Spreadsheet Program ကိုလုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ပေမယ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပေမယ့်သင်ကတရားဝင် site ပေါ်တွင် register ဖို့လိုအပ် IBM က Lotus ဆငျဖိုနီအထုပ်ကို download လုပ်ပါရန်။
ဆငျဖိုနီ Spreadsheet Download
နောက်ဆုံးအနေနဲ့အခြား ပို. ပို. လူကြိုက်များ spreadsheet အခမဲ့ရုံး suite ကို WPS ရုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည့် WPS စာရင်းဇယားများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီ Kingsoft ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
spreadsheets interface ကို, အထဲတွင်အဆိုပါ tools တွေကိုယခင်လိုင်းများမဟုတ် Excel ကို 2003 တလျှောက်ခေါ်ဆောင်သွားအစီအစဉ်များ, နှင့် Excel ကို 2013 ခုနှစ်နှင့်မတူဘဲ, လွန်းသည်ခါးပတ်ပေါ်ချထားပါသည်, ထို tab ကို၏အမည်ကို Excel ကို 2013 ခုနှစ်တွင်၎င်းတို့၏အမည်များကိုမှနီးပါးတူညီသည်။
ထို program ၏အခြေခံပုံစံ ET ဟုခေါ်ဝေါ်သော၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်တိုးချဲ့ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, စာရင်းဇယားများအလုပ်မလုပ်ခြင်းနှင့်စတိုးဆိုင်ဒေတာ Excel ကို (XLS နှင့် XLSX) ၌၎င်း, အချို့နဲ့အခြား extension များ (စသည်တို့ကို DBF, TXT, HTML ကို,) နဲ့ဖိုင်တွေ manipulate နိုင်ပါတယ်။ PDF ဖိုင် format နဲ့စားပွဲတင်ပို့ဖို့ရရှိနိုင်ပါအခွင့်အလမ်း။ စစ်ဆင်ရေးပုံစံ, စားပွဲဖန်တီး, Excel နှင့်အတူနီးပါးတူညီ features တွေနှင့်အတူအလုပ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မိုဃ်းတိမ်ကိုဖိုင်သိုလှောင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေရှိအဖြစ် built-in panel က google Search.
ထို program ၏အဓိကအားနည်းချက်ကအခမဲ့အဘို့, ဒါပေမယ့်တချို့တာဝန်များကိုအတွက်အသုံးပြုရနိုင်ပေမယ့်ကြောင်း (ပုံနှိပ် PDF ကို format နဲ့၌ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားသူများကို။ ) တစ်မိနစ်ကြော်ငြာတိုင်းတစ်ဝက်နာရီကြည့်ရှုရန်ရှိသည်မည်။
WPS စာရင်းဇယားများ Download
သငျသညျမွငျနိုငျအဖြစ် Microsoft က Excel ကိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်မအခမဲ့ applications များ၏အတော်လေးကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်။ သူတို့တစ်ဦးစီကိုအကျဉ်းချုံးအထက်တွင်ဖော်ပြထားသောထားတဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်နှင့်အားနည်းချက်များကိုရှိပါတယ်။ ဤအချက်အလက်ပေါ်အခြေခံပြီး, အသုံးပြုသူသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ရန်အသင့်လျော်ဆုံးရွေးချယ်ဖို့ဤအစီအစဉ်များ၏ယေဘုယျအမြင်အိပ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။